विपद्को पीडामा मलम लगाऊ | चितवन पोष्ट
यसवर्षको मनसुन सुरू भएयता नेपालका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण हजारौँ जनता विस्थापित भएका छन् । यसवर्ष २०० बढी मानिसको बाढीपहिरो र डुबानका कारण ज्यान गएको छ । दर्जनौँ व्यक्ति बेपत्ता छन् । बाढीपीडितको बिचल्ली भएका खबर दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेको छ । गत मंगलबार गएको भीषण पहिरोमा परी कैलालीको भजनीमा १६ सय ७१ परिवारका आठ हजार बढी मानिस बिचल्लीमा परेका छन् । वर्षाको समयमा बालबालिका, सुत्केरी तथा अशक्त वृद्धवृद्धाहरु हुलाकी सडकमै रात बिताउनु परेको विदारक तस्बिरले विपद् व्यवस्थापनको अवस्था उजागर भएको छ । यसवर्ष प्राकृतिक विपत्तिले दर्जनौँ घरपरिवार पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउन पुगे । अहिले देशभरि नै बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटानले हजारौँ जनता विस्थापित भइरहेका छन् । तर, राज्यले जनताको पीरमर्का र पीडामा मलम लगाउन सकिरहेको छैन । पीडित जनता कतिबेला पहिरो झरेर पुरिने हुन्, कतिबेला सिङ्गो बस्ती नदीको भेलले बग्ने हुन् र कतिबेला पानीले सिङ्गो सहर वा गाउँबस्ती नै डुबानमा पर्ने हुन् त्यसको कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । पूर्वी नेपालको कोशी ब्यारेजपीडितका कथाव्यथा हरेक वर्ष दोहोरिँदै जाँदा राज्यले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोशीपीडितका लागि राज्यले कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? जनताले यसको जवाफ चाहेका छन् ।
राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । दैवी विपत्तिसँगै आउने पीडा न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले पूर्वसतर्कताका अभियानहरु सञ्चालन गर्न सक्छ, सक्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, भोटेकोशी र मेलम्चीमा होस्, चाहे पर्वतको दुर्लुङका जनता पहिरोमा पुरिँदा होस् या कोशी ब्यारेज उर्लिएर स्थानीयवासीलाई बर्सेनि सिध्याइरहेको नियति किन नहोस् राज्य संवेदनहीन हुनुहुँदैन । हरेक वर्ष कोशीपीडितले मुआब्जा पाउन नसकेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेको छैन । विगत ७० वर्षदेखि भारतको आश्वासन पूरा हुने आशामा प्रतीक्षारत गरिब जनताका कति पुस्ता यसरी नै आशैआशमा रहनुपर्ने हो ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा हालेमालो गर्न सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको ध्यानाकर्षण किन हुन नसकिरहेकोे होला ? राष्ट्रिय विपत्तिमा तेरो र मेरो भन्न छाडेर जनताका पीडाव्यथामा मलम लगाउन किन चुकिरहेका होलान् राजनीतिक दलहरु ? राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने सरकार कोशीपीडितका सवालमा मौन बस्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
अहिले पीडैपीडाको समुद्रमा छाँद हालिरहेको नारायणी, कन्काई, कोशी, बागमती, राप्ती, सेती र कालीगण्डकी नदीको कटानले विस्थापित भएका जनता हुन् वा राजधानीको भक्तपुरस्थित हनुमन्ते खोलाको बहाबले स्थानीयका कोठासम्म डुबेका दृष्टान्त नै किन नहोस्, देश नमीठो पीडामा छ । कर्णाली प्रदेशको डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा भेरी नदीको बहाब हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुँदा त्यहाँका जनता त्रासैत्रासमा बाँचिरहेका छन् । भेरीको पानीले केही मिनेटमात्र धार परिवर्तन गरे हजारौँको जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहँदा पनि सरकारले खतराको पूर्वसूचना दिने यन्त्रसम्म राख्न सकेको पाइँदैन । नेपालका नदी, खोला बढ्दा कतिबेला कस्तो विपत्ति निम्त्याउँछ त्यसको पनि पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । उच्च जोखिममा रहेका घरटहरा निर्माणमा रोक लगाउने, बस्ती सार्ने, पूर्वसतर्कताका अभियान गर्ने र उद्धार तथा राहत टोली तयारी अवस्थामा राख्नेजस्ता विपद् व्यवस्थापनका काम भने तीनै तहको सरकारले गर्न सक्छ । बर्साद्को समयमा जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । विपद्को पीडामा मलम लगाउन सकेमात्रै राज्य रहेको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् । वर्षाको समयमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र सुत्केरी अत्यधिक जोखिममा रहने भएकाले तिनीहरुलाई जोगाउन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अविरल बर्सादका कारण बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुका जनताका लागि सरकारले उद्धार तथा पीडामा मलम लगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
364 शेयर गर्नुहोस्